Madaxweynaha Uganda Yuweri Museveni iyo Ra’iisul Wasaare ku xigeenka magacaaban ee Somalia oo kulmay.. – iftiin fm
Madaxweynaha Uganda Yuweri Museveni iyo Ra’iisul Wasaare ku xigeenka magacaaban ee Somalia oo kulmay..
October 22, 2020 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka magacaaban, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) iyo Marwada kowaad ee Dalka Marwo Seynab Cabdi Macalin oo ku sugan dalka Uganda ayaa kulan la qaatay Madaxweynaha dalkaas Yuweri Museveni.
Kulankaas oo ka dhacay Madaxtooyada Qaranka Uganda ayaa ahaa mid soo dhaweyn ah oo lagu soo dhaweynayay wafdiga ka socoda Dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo lagu wado inuu ka qeyb galo Munaasabada lagu fura shirkad balaaran oo soo saarta sokorta.
Shirkadan oo ay leedahay Haweeney Soomaliyeed oo ganacsi balaaran ku leh dalalka Barigga Afrika ayaa lagu wadaa in Maalmaha soo aadan laga furo dalka Uganda.
Wafdiga uu horkacaya Ra’iisul Wasaare ku xigeenka jamhuuriyada Faderalka Soomaliya Mahad Maxamed Guuleed (Khadar) iyo Marwada kowaad ee dalka Marwo Seynab ayaa qeyb ka ah wafuud ka kala timid caalamka oo furaya Warshadda sokorta.
← Dad ku dhintay rabshado ka dhacay caasimada Guinea.
Mareykanka iyo Ruushka oo ku heshiiyay nukliyeerka. →